Soo dejisan Backgrounds HD 4.3.54 – Vessoft
Soo dejisan Backgrounds HD
Jeeda HD – software ah aad u aragto iyo u dhigay, wallpapers tayo sare leh shaashadda of qalab aad. Software ka kooban yahay tiro badan oo sawiro ah oo xiiso leh kala qaybsan oo ku saabsan mowduucyo sida dabiiciga ah, sports, koonkan, jacayl, khayaalka, ciyaaraha iwm jeeda HD u saamaxaaya in ay qiimeeyaan sanamyadii, iyagoo aad ku dartid Bookmarks iyo aragtida by user rating ee. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay soo bixi wallpapers iyo ogeysiiyo ah oo ku saabsan images cusub. Jeeda HD u saamaxaaya in ay ku badasho images la saaxiibo ka shabakadaha bulshada kala duwan.
Dad badan oo images ku saabsan mawduucyo kala duwan
Kumbiyuutarada of images
Assessment of wallpapers
Exchange la saaxiibo aad ka shabakadaha bulshada
Backgrounds HD Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Vine 3.3.08
العربية, English, Français, Español... Line 5.5.1